AMBALAVATO-FIANARANTSOA : Tovolahy iray maty voatsatok’antsy tao anaty toeram-pisotroana
Saika niteraka savorovoro teo an-tampon-tanànan’i Fianarantsoa ny vono olona niseho tao anatina toeram-pisotroana iray tao Ambalavato, ny alahady hariva lasa teo. 22 mars 2017
Nandray an-tanana faran’izay haingana ny raharaha ny Polisy, niezaka tsy ihoaran’ny hatezeran’ny olona izy ireo ary nisambotra sy nanafina ny toerana nametrahana ilay nahavanon-doza.
Hatreto voalaza fa afenina fatratra ny toerana nametrahana ity farany mba hialana amin’ny mety hisian’ny fihoaram-pefy eo amin’izay mikasa ny hanao izany. Araka ny vaovao voaray, ny alahady hariva, tokony ho tamin’ny 7 ora no niara-nisotrosotro tao amina toeram-pisotroana iray teo an-tanàna ireto roa lahy mpinamana. Rehefa samy niakatra ny hamamoana dia nanomboka nifanao vava tsy ambina ny roa tonta. Samy tsy nisy nahazaka an-daniny sy an-kilany ka raikitra amin’izay ny ady sy ny fifamaliana.
Fantatra fa nanana antsy maranitra tany am-paosiny ny iraikalahy tamin’izy ireo, ity farany avy hatrany dia nanatsatoka izany tamin’ilay nifamaly taminy.
Nandriaka ny ra tao anaty “bar”, lalina dia lalina ny lelan’antsy tafiditra teo amin’ny kibony ka nitarika ny fahafatesany teo noho eo. Ilay nahavanon-doza kosa vaky nitsoaka. Ireo olona tao anatin’ilay toeram-pisotroana ihany no namonjy ilay niharam-boina, ny sasany kosa tsy nanaiky fa lasa nanenjika ilay nahavanon-doza. Tonga hatrany an-tanànan’Andriamboasary ireo fokonolona nanenjika kanefa tsy tratra mihitsy ilay lehilahy.
Ny androtr’io efa misasak’alina no tonga teo am-pelantanan’ny Polisy ny raharaha. Izy ireo no nanao ny fikarohana ka nahatratra ilay tovolahy nanatsatoka antsy. Ahiana
ny mety hisian’ny korontana any an-toerana manoloana ity tranga ity.
Efa voatazona ao amin’ny biraon’ny Polisy ny tenany ary afenina ny olona ny toerana itazonana azy hialana amin’ny mety hisian’ny fitakiana hanao fitsaram-bahoaka tahaka ireo efa niseho tamin’ny faritra hafa.